कोदो–फापर सस्तो, चाउचाउ र पाउरोटी महँगो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
रैथाने बाली अपहेलित
असार २९, २०७६ रमेशकुमार पौडेल
(चितवन) — रैथाने बालीको प्रवर्द्धन कसरी गर्ने ? रैथाने परिकारलाई बजारमा पुर्‍याउन के गर्नुपर्ला ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न कृषि ज्ञान केन्द्रले शनिबार भरतपुरमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो ।
फापर खेती गर्ने भण्डाराका किसान हरिप्रसाद बर्तौलाले भने, ‘फापर खेती गर्न सजिलो छ । खनजोत पनि राम्रोसँग गर्नु पर्दैन । राम्रो फले पनि घरमा प्रयोग हुँदैन । किन्न आउनेले ३५–४० रुपैयाँ किलोमा लैजान्छन् ।’
बर्तौलाको कुरा सुनेर डा. अरुणा उप्रेती छक्क परिन् । रैथाने बालीमा हुने पोषक तत्त्वबारे जानकारी गराउन आएकी उप्रेतीले काठमाडौंमा एक किलो फापरको पिठो १५० रुपैयाँमा किन्दै आएको सुनाइन् । किसानले राम्रो मूल्य नपाएको सुनेपछि उनले घरमा प्रयोग गर्न र पाहुना आउँदा रोटी पकाएर दिन सुझाइन् । बर्तोलाले फेरि अर्को तर्क दिए, ‘घरमा पनि खाँदैनन् । पाहुनालाई फापरको रोटी के दिनु, हेपेको भन्लान् भनेर चाउचाउ किनेर दिन्छौं ।’
किसानले बहुमूल्य वस्तु सस्तोमा बेचेर कमसल महँगोमा किन्ने गरेको यो एउटा उदाहरण हुन सक्छ । ‘कोदो, फापर, मकै पनि के खानु, चाउचाउ, पाउरोटी पो खाने हो भन्ने चिन्तन बढेका कारण यस्तो भएको हो,’ उप्रेतीले भनिन्, ‘रैथाने बालीलाई समाजले अपहेलना गर्‍यो । पोषणका हिसाबले यी बहुमूल्य छन् ।’
कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली विकास अधिकृत माधव पौडेलले कोदो, फापर, चिनु, कागुनो, उवा, लट्टे, जुनेलो, जौजस्ता रैथाने बालीको संरक्षण र बजार विस्तारमा कार्यालय जुटेको बताए । ‘हाम्रो कार्य क्षेत्र चितवन र मकवानपुर जिल्ला हो । यी दुई जिल्लामा रैथाने बालीको प्रचुर सम्भावना छ । खेती पनि हुँदै आएको छ । खपत राम्रो नहुँदा किसान भने निराश छन् । निराशा हटाउनु आवश्यक छ,’ पौडेलले भने ।
रैथाने बाली उच्च पोषण भएका ‘सुपर फुड’ भएको उप्रेतीले बताइन् । ‘हामीले यसको महत्त्व बुझेका छैनौं । विदेशमा यसको राम्रो खपत छ । यहाँ पनि धनीहरूले खान थाले ।
सुपरमार्केटहरूमा कोदो, फापरको पिठो महँगोमा बिक्छ । सबैले प्रयोग गर्ने बनाउन हामीले पनि केही उपाय लगाउनुपर्छ,’ डा. उप्रेतीको सुझाव थियो । उनले रैथाने बालीका परम्परागतभन्दा भिन्न परिकार बनाउन उत्तम हुने बताइन् । ‘त्यस्ता परिकारहरू आफैं खाने गरौं अनि घरमा आउने पाहुनालाई पनि खुवाउने गरौं । हामी आफू पनि खाँदैनौं ।
पाहुना आए बिस्कुट, पाउरोटी र चाउचाउ खुवाउँछौं । यसरी हुँदैन । सुरुवात हामी आफैंबाट गर्नुपर्छ,’ उप्रेतीले आग्रह गरिन् । यस्तै सरकारी अस्पतालका क्यान्टिनहरूमा रैथाने बालीका परिकारहरू बेच्ने परिपाटी मिलाए बजारीकरणमा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने सम्भावना रहेको पनि उप्रेतीले बताइन् ।
‘तीव्र रूपमा व्यवसायीकरण गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ । सरकारी कार्यालयको खाजा रैथाने बालीको होस् । अस्पतालहरूमा रैथाने बालीको परिकारहरू बन्न र बिक्री हुन थालुन् । त्यसपछि यसको प्रवर्द्धन गज्जवले हुन्छ,’ उप्रेतीको भनाइ थियो । जौको सातु कसैले नखाने तर त्यसैबाट बनेको हर्लिक्स घरघरमा पुर्‍याउन मार्केटिङवालाले सहयोग गरेका हुँदा सरकारले पनि रैथाने बालीको उत्थानका लागि मार्केटिङ कौशल देखाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
रैथाने बालीको उपयोग नबढे किसानहरू निराश भएर खेती गर्न छाड्ने अगुवा कृषक चन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताए । विदेशमा यस्ता बालीबाट बनेका खाद्य पदार्थहरूको प्रयोग अत्यधिक छ । ‘नेपालमा भने रैथाने बाली लोप हुने, विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आउन सक्छ ।
प्रकाशित : असार २९, २०७६ १०:२४